Chuwi Hi10 Pro, nyocha na uche | Gam akporosis
Mbadamba ọdịnala na-efunahụ nnukwu ibu n'ahịa. Mpempe 2-in-1 na-amalite ebe ha, ngwaọrụ ndị enwere ike itinye keyboard, na-eme ka ntụgharị ha dị ukwuu.
Ihe omuma atu doro anya bu Chuwi Hi10 Pro, ngwaọrụ nke na-enye anyị ike niile nke Windows 10 na mgbakwunye na ịrụ ọrụ na Remix OS 2.0, sistemụ arụmọrụ dabere na Android 5.1 ka ị nwee ike ịhọrọ usoro sistemụ ịchọrọ iji rụọ ọrụ. Enweghị oge ọzọ, ana m ahapụrụ gị nke anyị Chuwi Hi10 Pro mbadamba nyocha, mbadamba nkume nke na-erughị euro 160 na Aliexpress na ịpị ebe a.
2 Njirimara teknụzụ Chuwi Hi10 Pro
4 Onwe ya
5 Igwefoto na ụda
7 Windows 10 na Remix OS 2.0
Tupu ịmalite nke a Nyochaa na Spanish nke mbadamba Chuwi Hi10 Pro Iji kwuo na Chuwi bụ akara ndị China nke na-eguzo na ahịa mbadamba site na ịwepụta azịza zuru oke na ọnụahịa knockdown.
Emeputa emewo mbadamba nkume kpọrọ ihe nke ukwuu ma na launching usoro nke zuru ezu na ngwaahịa n'ime iru nke niile Amawaputala. Ihe atụ kachasị ọhụrụ? N'ebe ọwụwa anyanwụ Chuwi Hi10 Pro, ngwaọrụ nke, na-enweghị oke ngosi, ga-egbo karịa mkpa nke onye ọrụ ọ bụla, na-enye atụmatụ na ngwaike karịa ezuru maka ndụ ụbọchị nke imirikiti ndị ọrụ. Ugbua agwala m gị nke ahụ, maka Euro 200 dị na Amazon ịpị ebe a, Ole na ole ngwọta ị ga-ahụ dị ka zuru ezu dị ka nke a ọhụrụ Chuwi ngwọta.
Ngwá ọrụ anyị nwalere na-abịa na a keyboard mkpọchi, nke na-adịghị na Amazon mana ị nwere ike ịzụta site na Aliexpress na ịpị ebe a Nke a na-enye anyị ohere ịme ohere kachasị nke Chuwi Hi10 Pro site na ịnwe ike iji ya ma oge ezumike anyị ma rụọ ọrụ n'enweghị nsogbu.
Chuwi Hi10 Pro pụtara na mbido nke mbụ. ya A na-eji ígwè akpụ azụ azụ isi awọ nke na-enye onu ogugu a ezigbo onu ahia. Na ihu anyị na-ahụ ihuenyo 10.8 nke nwere okpokolo agba dị na ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na mbadamba ngwakọ a anaghị agafe euro 200.
Na a ọkpụrụkpụ nke 8.8 mm na a ibu nke 686 grams, ngwaọrụ ahụ dị ike karịa ka ọ dị, mana ekwesịrị ikwu na maka ọnụahịa ya, ọ nwere usoro anaghị egbochi. Na ike nke ndị China Chuwi Hi10 Pro mbadamba na-enye maka ibu a. Ka o sina dị, ọ bụrụ na ijiri ya, ngwaọrụ ahụ nwere ike ijikwa.
Rịba ama na Chuwi Hi10 Pro nwere a capacitive physical button na Windows logo na n'ihu, ọ bụ ezie na m na-ama na-agwa gị na ọ na-eji kama nta. N'elu akụkụ ahụ bụ ebe ọdụdụ micro USB dị, microHDMI mmepụta dị, yana oghere kaadị ebe nchekwa na jaket ọdịyo 3.5 mm.
Na mgbakwunye, mbadamba nkume nwere a Ọdụ USB Type-C ịgba ụgwọ batrị, na mgbakwunye na bọtịnụ ngbanye / ngbanye n'akụkụ bọtịnụ njikwa olu. Mkpọchi ndị a niile na-enye njem dị mma na nguzogide nrụgide karịa nke ziri ezi, yabụ na akụkụ a enweghị m ihe m ga-akatọ.
N'ozuzu, ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ọnụahịa ya, ọrụ Chuwi rụrụ na nke a dị ezigbo mma. Ee, ọ bụ eziokwu na mbadamba ụrọ ọhụrụ Chuwi na-ada na ngalaba igwefoto, dịka ị ga-ahụ ma emechaa, mana na-echeba ngwụcha nke azịza ọhụrụ Chuwi, ngwaike nke mbadamba nkume ndị a nke nwere gam akporo nwere na ọnụahịa ya Nhọrọ ole na ole ị nwere ike chọta nke nwere ike ịsọ mpi na Hi10 Pro.
Njirimara teknụzụ Chuwi Hi10 Pro
- Ihuenyo: 10,8-anụ ọhịa IPS nwere mkpebi 1.920 x 1.280 pixel.
- Nhazi: Intel Atom x5-Z8300 64-bit na 4 cores na 1,44 / 1,84 GHz.
- Esịtidem nchekwa: 64 GB na oghere microSD ruo 128 GB.
- ese foto: 2 megapixel n'ihu na azụ.
- Ports: microUSB, USB Type-C, microHDMI mmepụta na ọdụ isi.
- rụọ: 8.400 mAh na ụgwọ ngwa ngwa.
- Sistemụ nrụọrụ: Windows 10 na Remix OS 2.0 (dabere na gam akporo).
- Ahịa: 200 euro na Amazon
Chuwi Hi10 Pro juru m anya nke ukwuu na ọkwa arụmọrụ. ya Intel ATOM nhazi Ọ dị mfe mana ọ karịrị emezu ebumnuche ya, na-enye gị ohere isoro ya rụọ ọrụ kwa ụbọchị. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngwa ndị onye ọrụ ọ bụla chọrọ ka ọ meghee n'enweghị mmetụta ọ bụla. N'oge m na-anwale mbadamba nkume ahụ enwewo m ike ịrụ ọrụ na Chuwi Hi10 Pro na-enweghị nsogbu, na-enye ihe karịrị arụmọrụ ziri ezi maka ọrụ ọfịs, ịgagharị na Internetntanetị ma ọ bụ ịlele ọtụtụ ọdịnaya.
N'akụkụ a, ndị 4GB nke Ram nke nwere nke a ebe obu na ha ekwe ka njikwa otutu ihe di nma. N'ezie, nchekwa ahụ dị ntakịrị, ihe na-ahụkarị mgbe ị na-ebugharị faịlụ buru ibu.
Ihuenyo aka, nke anyị ga-ekwu maka mgbe e mesịrị, na-aza ngwa ngwa na isi ihe anyị. Na mkpokọta, na mbadamba, enweghị m nsogbu na-agagharị na ịntanetị, na-ekiri vidiyo, ịnweta netwọk mmekọrịta ma ọ bụ na-edezi ederede na foto na-enweghị nsogbu, ọ bụ ezie na mgbe ị na-anwa ọrụ ndị ọzọ na-achọsi ike dị ka ndezi vidiyo, arụmọrụ na-ata ahụhụ. Kpachara anya, ana m ekwu banyere akụkụ Windows 10 kemgbe Remix OS na-arụ ọrụ dị ka silk N'iburu n'uche akụkụ nke ọ dị, mbadamba nkume ahụ na-enye ike karịrị nkezi.
N'ozuzu, ọ bụ mbadamba nkume nwere ike karịrị nkezi. Dị ka oge niile, anyị na-arụ ọrụ ule arụmọrụ banyere ngwaahịa anyị nyochara. N'ihe banyere Chuwi Hi10 Pro, site na itinye Windows 10 na Remix OS, anyị chọrọ iji tụọ arụmọrụ na sistemụ abụọ ahụ. Anyị na-amalite na PCMark 8 akara, nke gosipụtara na anyị na-eche ihu a dị mfe ma karịa ngwaọrụ mgbaze:
Otu n'ime ike nke Chuwi Hi10 Pro mbadamba bụ ihuenyo ya. Ngwaọrụ nwere 10.8 inch IPS panel Ọ rutere mkpebi nke 1920 x 1280 pikselụ, ịbụ ubé ibu karịa ndị ọzọ mbadamba na mpaghara, ihe m na-enwe ekele mgbe eji ndị a windo dabeere sistemụ.
Screendị ihuenyo dị ntakịrị karịa 16: 9 nke anyị na-ahụ na kọmputa ndị ọzọ, mana ọ na-enye ohere ijide Chuwi Hi10 Pro n'ụzọ ziri ezi ka o wee nwee nkasi obi, ọ bụ ezie na o doro anya na ọ ga-eji ya na ụzọ ala. , ebe anyi gha afanye aka na ohere gi.
Dị ka panel àgwà bụ n'ezie ezi. N'ụzọ dị otu a agba ndị doro anya ma dịkwa nkọ, nwere oji miri emi na akụkụ nlele na-enye anyị ohere ịnwe ọdịnaya nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ikwu ya ihie dị ntakịrị ngosi, karịa iji ya mee ihe na gburugburu emechi, mana mgbe m na-anwale mbadamba nkume ahụ n'oge anwụ na-achasi ike, ahụghị m na ihuenyo na 100%. Enwere ike iji ya zuru oke, mana otu isi ihe ọzọ na-efu iji hụ nkọwa niile n'ụzọ doro anya.
Na nkenke, ma na-eburu n'uche ọnụahịa ya, ihuenyo ahụ karịa ọrụ ya. Na, agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na site na isi nchapụta ihuenyo ga-abụ 10, n'ozuzu ya na-akpa agwa nke ọma, na-egbo mkpa nke onye ọrụ ọ bụla.
Na ngalaba kwụụrụ anyị chere ihu na ngwaọrụ nke juru m anya. Chuwi Hi10 Pro nwere ike igwu vidiyo maka awa 9 n'usoro na 50% nchapụta. Nke a sụgharịrị ịbụ awa ole na ole nnwere onwe, na-ekwe nkwa ụbọchị ọrụ zuru oke. Na ngwaọrụ nke ụdị a, nnwere onwe bụ ihe dị mkpa, nke kpatara ya mbadamba ụrọ ọhụrụ Chuwi na-egosi ọtụtụ ihe na nke a.
O doro anya na ihe niile ga-adabere na iji anyị enye ya. Mgbe m na-eji mbadamba nkume ahụ eme ihe mgbe ụfọdụ, ihe dị ka awa 2 kwa ụbọchị, ngwaọrụ a adịruola ụbọchị anọ na, yabụ na ọ gaghị adị mkpa iji na-akwụ ụgwọ mbadamba Chuwi Hi4 Pro mgbe niile. sistemụ nke ngwa ngwa, ihe m nwere ekele.
Igwefoto na ụda
Chuwi Hi10 Pro nwere kamera abụọ dị mfe, yana igwefoto dị n'ihu yana igwefoto azụ nke 2 megapixels. Eziokwu bụ na arụmọrụ ahụ dara ogbenye nke ukwuu, mana na-echeba ọnụego ọ gbanwere na ụfọdụ ngalaba ha ga-egbutu. Agbanyeghị, mkpebi ya ezuola iji kpọọ oku vidiyo, mana chefuo iji ya were foto.
N'ihe banyere ụda, Chuwi Hi10 Pro nwere ndị ọkà okwu abụọ n'akụkụ nke nwere ikike a na-anara nke ọma na ogo ogo ya. Na ọkwa ọdịyo, o zuru ezu ige egwu, na-ekiri usoro ihe nkiri na ihe nkiri yana ịnwe egwuregwu vidio na-enweghị nsogbu, agbanyeghị na-enweghị oke egwu. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike iburu mbadamba nkume ebe ọ bụla iji lelee ihe nkiri na usoro ma ọ bụ gee egwu kachasị amasị gị na enweghị isi nsogbu, atụla anya ịdị mma dị elu mana ọ ga-ezuru iji nwee ọ withoutụ na-anụghị ụda mkpọ mkpọ na-enweghị isi nke mbadamba ala na mbadamba.
Akụkụ ọzọ na Enwere m mmasị na kiiboodu nke mbadamba Chuwi Hi10 Pro. Onwe m, echere m na ọ dị mkpa ịzụta ya ebe ọ na-abawanye arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ. Iji malite, kiiboodu bụ ụdị mkpuchi nke mere na ọ na-ekpuchi mbadamba nkume mgbe emechiri ya.
Mgbe emepechara ya, ọ na-apịaji nke oma, na-eje ozi dị ka mbadamba mbadamba. Iji jikọọ ya na mbadamba Chuwi Hi10 Pro, ọ dị mfe dịka ịbanye na magnetik njikọ iji kwado ngwaọrụ abụọ ahụ. Ma buru n'uche na keyboard adịghị mkpa batrị ma ọ bụ na ọ chọghị ọdụ ụgbọ mmiri ọzọ.
Ahụigodo ahụ mara ezigbo mma, nwere ọmarịcha velvety ojii mechara maka ịrụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ezie na ibido, ọ dị ka ọ pere mpe, ozugbo ijiri ya mee ihe, eziokwu bụ na arụmọrụ ọ na-enye dị ezigbo mma, na-enwe ezigbo mkparịta ụka yana ọsịsọ ọsọ. Abụ m onye nwere nnukwu aka ma anaghị m ewe ogologo oge ijide keyboard a ka ọtụtụ ndị ọrụ wee jiri ogo ya ọsọ ọsọ. Buru n'uche na keyboard Chuwi Hi10 Pro na-abịa n'asụsụ Bekee, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịhọrọ nhazi Spanish iji leta «ñ».
Windows 10 na Remix OS 2.0
Mbadamba ụrọ Chuwi Hi10 Pro pụtara maka Windows 10 na arụ ọrụ Remix OS 2.0 dabere na gam akporo 5.1 Lollipop. Nke a bụ isi ebe ngwaọrụ limps kacha kemgbe ọ bụ ụdị ochie nke gam akporo, ọ bụ ezie na enwebeghị m nsogbu ọ bụla mgbe m na-eme ngwa ọ bụla.
Buru n'uche na Remix Os 2.0 nwere atụmatụ dịpụrụ adịpụ na gam akporo yana na ọ dị nnọọ ka Windows 10. N'ụzọ dị otú a ọ dị mma iji keyboard na òké ma ọ bụ trackpad.
Anọ m na-anwale ngwa dị iche iche ebudatara na ụlọ ahịa ngwa Google, nke etinyeworị na mbadamba nkume ahụ, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ Achọpụtala m ngwa ọdịnala na-adabaghị n'ụzọ ziri ezi na windo nke Remix OS ji. Nke a abụghị ihe kpatara Chuwi, mana ndị mmepe na-aga n'ihu na-elekwasị anya na ịmepụta ngwa mkpanaaka, yabụ enwechaghị nkatọ na nke a.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na anyị pụrụ igosipụta a adaba ngosi menus na-agụnye ịnweta nnweta ọrụ dị iche iche. Na mpaghara n'aka nri enwere ogwe ọrụ na akara ngosi iji gbanwee ntọala dị iche iche na-amasị anyị.
Mbadamba Chuwi Hi10 Pro emeela ka anyị kwenye. Ngwaọrụ ahụ karịrị echiche mbụ nke 2 na 1. Igodo ya na eziokwu ahụ na ọ na-arụ ọrụ na Windows na gam akporo na-emeghe ọtụtụ ihe na-adọrọ mmasị nke ohere maka obere obere laptọọpụ dị ọnụ ala.
Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a ụfọdụ njirimara teknụzụ zuru oke na ọnụahịa mkparị, anyị na-eche otu n'ime nhọrọ ndị kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ mbadamba China nke nwere gam akporo na Windows 10 maka ihe na-erughị euro 200.
Ezi mma mechara
Ihuenyo ahụ dị ezigbo mma
Remix OS na-agbagharị nke ukwuu site na ngwa Android
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Chuwi Hi10 Pro, nyocha na uche
Foto Google enyelarị ntụnye na nnakọta mkpokọta
ANDROID MARA !! Kpachara AnyaPetya ihe mgbapụta ọhụrụ ahụ nwere ụwa ịlele